PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - 6. I-EX YESABISA INTOMBI YAMI
6. I-EX YESABISA INTOMBI YAMI
IMPENDULO: Uma umuntu ekujolela uboke uhlale naye phansi nivulelane izifuba, nixoxe. Ningalwi kodwa nikhulume njengabantu abakhulile, ubuze ukuthi yini le emenza akujolele, umkhulule akutshele ukuthi yini le ashoda ngayo kuwe emenza aphumele ngaphandle.
Phela umuntu uma ekushiya eyofuna abanye abantu kusuke kukhomba ukuthi kukhona le nto ashoda ngayo. Okungikhathazayo odabeni lwakho ukuthi uthi isithandwa sakho sesikujolele izikhathi eziningi.
Lokho kungitshela ukuthi ukujola wumkhuba waso nje, hhayi ngoba kusuke kuyisilingo esingafikela noma ngubani ngesikhathi esithile. Angazi-ke noma akhona yini amathuba okuba sishintshe kulo mkhuba waso. Phela kukhona abantu abangenasimilo, futhi ongeke ubenze lutho.
Ukungabi nasimilo yisifo esingelapheki kumuntu, kuze kukhale yena bese eshintsha. Dadewethu, nguwena ozozikhethela ukuthi ufuna ukuhlala nalolu hlobo lomuntu noma ufuna ukushiya uziqhubekele nempilo.
Uma ukhetha ukuhlala kufanele wazi ukuthi kusazokwenzeka nje akuphule inhliziyo. Ngiyakuqonda ukuthi kunzima ukwehlukana nomuntu usamthanda kodwa ngesinye isikhathi kusuke kufanele usithathe isinqumo sokumshiya umuntu ukuze uphephise inhliziyo yakho ekuhlukumezekeni. Yebo uzokhala, kodwa izinyembezi ziyoma, futhi nesilonda esiyosala enhliziyweni siyogcina sipholile UMBUZO: KUNOSISI engangithandana naye kodwa sahlukana. Uhambe etshela abantu ukuthi ufuna sibuyelane, akangitsheli mina.
Sengazitholela umuntu, ngikahle, siyathandana. Inkinga-ke manje lo sisi usesabisa lona engithandana naye uma embona ehamba emgwaqweni, ngisho nabangani bakhe bamthuke bathi wathatha indoda yomuntu. Ngenzenjani kodwa?
IMPENDULO: Ilula kakhulu nje le ndaba yakho mfowethu, futhi ayisaqondene nawe. Ukwesabisa umuntu kuyicala. Umuntu osabisa omunye kusuke kufanele abikwe kwabomthetho, bese bemthathela izinyathelo ezifanele.
Thatha umuntu wakho lo othandana naye nihambe niye emaphoyiseni niyoyibika le nkinga. Asikho nje isidingo sokuba ize ikuphathise ngekhanda le ndaba.